Chiperengo cheChirungu che iron art chinonzi blacksmith. Dema zvinoreva ruvara rweganda resimbi. Smith izita rakajairika. Iron art ine nhoroondo refu, uye kuvandudza kwesimbi art zvinhu uye hunyanzvi kune nzira yekuvandudza yemakore anopfuura zviuru zviviri. Iron art, senge yekuvaka dec ...
Imba yekushongedza yekushongedza, inotonhorera uye ine fashoni fashoni
Mhuri dzakatipoteredza hadziwanzoshandisa midziyo yemumba kushongedza nzvimbo yadzo. Chizhinji chechikonzero chiri mumafungiro evanhu emidziyo yesimbi inotonhora, yakaoma uye yakachipa. Nekukurumidza kusimudzira kwechikamu cheindasitiri, iron art processing technology inofambirana nenguva. Simbi yakarohwa...
Marble coffee table muimba yekutandarira
Iyo tafura yekofi ndeimwe yeakakosha uye mashoma fenicha muimba yekutandarira. Isu tinogara tine akawanda mazano pakusarudza, kana kuda hukuru hukuru, kana senge kukosha kwepamusoro, hukuru hwakasiyana hwekamuri yekutandarira, uye kutsvaga kwekugadzira tafura yekofi. Different. Nhasi tichatarisa kune yakakwira-inotonhorera ...
Tafura yekofi inoenderana nesofa, ichisiya pasina nzvimbo isina chinhu mukona
Maziso evanhu anowanzo gara akatarisa kune vanopikisa vakaita semasofa nematafura ekofi. Sekuziva kwemunhu wese, pesvedzero yebasa rekutsigira saBian Ji pane iyo yakazara pateni haifanirwe kurerutswa. Tafura yepadivi ine hukasha haingogone kungoita yekupedzisa kubata kwevapenyu ...
Rimwe divi tafura yekofi, kuwana aesthetics yeimba yekugara
1. Nordic light luxury coffee table Matafura etafura yekofi akakura kana maduku, uye dhizaini yacho yakaenzana uye yakatenderera. Tinowanzo sarudza maererano nezvatinoda. Pachikonzero chekufananidza ne sofa, kunaka uye kushanda kweimba yekugara kunogona kuwanikwa. Tea table...
Iyo yakawanda yakawanda yekushandiswa kwemazuva ano iron art
Chituru chesimbi Chigadziko chesimbi chinoita kuti makumbo anotsigira echituru ataridzike akatetepa uye achipenya. Dhizaini yakatenderedza inotaridzika chaizvo. Iine mwenje cushion ruvara, inogona zvakare kubvisa kumwe kutonhora kwekunzwa kwesimbi art, ichisiya imwe inodziya uye yakagadzikana yekumba kunzwa. . Yakanaka inotakura-ab...
Imba yekutandarira art madziro wachi, kutyora yechinyakare yakagadziriswa aesthetics
Kunyange zvazvo mafoni emazuva ano evanhu asingasiyi muviri, zviri nyore uye zviri nyore kutarisa nguva, asi wachi yemadziro inokosha kumba. Haisi chete chishandiso chekutarisa nguva, asiwo yekushongedza pamadziro. Iyo yechinyakare yewachi yemadziro inogutsa ...
Retro yakagadzira simbi fenicha mbiri-mativi runako rwemba
Hazvina kuoma kuwana kuti isu hatiwanzo shandisa simbi fenicha pakushongedza nekushongedza. Muchokwadi, pane chimwe chikonzero nei vanhu vasingasarudze fenicha yesimbi. Kugadzirwa kwesimbi kunotonhora uye kwakaoma, uye kunowanzoita kuti vanhu vanzwe kuti vakagadzirwa zvakaomarara. Muchokwadi, vazhinji vaka ...
Iko kunakidza kwesimbi kunopisa mumba
Iyo yekuchengetera muimba yekutandarira inogona kukamurwa kuita TV kabati nzvimbo uye sofa nzvimbo. Vanhu vane zvakawanda zvinokanganisa vanozongosarudza dhizaini yakakura-inokwana fenicha kuti isangane nezvinodiwa zvavo zvezuva nezuva zvekuchengeta. Chipfuva chikuru chedhirowa chakakwana. Avo vari kunyanya kutsvaga runako nekushongedza ...
Kushongedzwa negirini, kuoneka kunozorodza
Hazvina mhosva kuti unoshandura sei chimiro chebindu rebhakoni, zvirimwa zvakasvibirira zvakakosha. Munguva yechando, girinhi inoratidza kusimba, uye muzhizha, girinhi inotonhorera inooneka uye inonyaradza kushatirwa kwako kwemukati. Pamusoro pezvigadziko zvemaruva uye zvidyarwa zvehari, nzvimbo yemadziro inogonawo kuve yakashongedzwa, uchishandisa gre...
Iyo yakareruka yakasarudzika yesimbi art muhupenyu hwezuva nezuva
na admin pa 21-10-04
Chiedza chemhando yekushongedza chave chakakurumbira mumakore achangopfuura uye chave chichidiwa nevanhu vazhinji. Iyo yakagadzirwa nesimbi fenicha inogona kunzi ndiyo inomiririra chinhu chechiedza chemhando yepamusoro. Pazere, chimiro uye ruvara rwesimbi yakagadzirwa fenicha yakawedzera yemhando yepamusoro uye inoyevedza, uye iyo...
Yakagadzirwa simbi yekushongedza madziro emba
Metal Wall Art Iyo monotonous chena madziro, kana ichienzaniswa neyekare dema ruvara, inoshandisa ine mavara esimbi zvinhu zvekushongedza imba, izvo zvinogona kuunganidza simba rekamuri yese. Rusvingo rwakaita semupumburu mukuru wemifananidzo, rega iwe udzore pfungwa dzako, shandisa zvinhu zvesimbi kugadzira zvakasununguka ...
123456 Next > >> Peji 1 / 8
Modern Garden Art, Metal Garden Decoration, mwenje wekushongedza, mwenje wakatungamirira, Garden Decor Metal, mwenje wezuva,